jigjiga: Shirkaddii ugu horreysay ee ka hirgelisay adeeg dhanka Maaliyadda ah - BBC News Somali
jigjiga: Shirkaddii ugu horreysay ee ka hirgelisay adeeg dhanka Maaliyadda ah
Lahaanshaha sawirka RAYS
Shirkadda adeegga maaliyadda ee Rays ayaa deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ka biloowday adeegyada Maaliyadda ee ay deegaannadu bixiyaan.
Maareeyaha guud ee shirkadda Rays Abdicasiis Xasan Cumar oo BBC-da wareysi gaar ah siiyey ayaa sheegay in shirkaddu ay tahay tii ugu horreysay oo ay Soomaali yeelato oo adeeg dhinaca Maaliyadda ka hirgelisa deeganka Soomaalida.
Horay waxaa deegaanka Soomaalida uga jiray Bangiyo iyo Shirkado bixiya adeegga maaliyadda oo ay dowladdu leedahay.
Cabdicasiis mar uu ka hadlayey ujeeddada shirkadda Rays loo aas aasay ayuu sheegay inay wax ka qabato baahida ka jirta dhanka adeegga maaliyadda oo aan deegaanka gaarin, haddii ay jiraanna ku kooban magaalooyinka waaweyn oo keli ah iyo iney bixiso adeeg maaliyadeed oo shareecada Islaamka ku saleysan.
"Shirkadda Rays waxaa la aasaasay June 2014-kii oo ay sharciyaddeeda ka qaadatay bangiga dhexe ee Itoobiya balse caqabadda ay kala kulantay xukumaddi hore ee Deegaanka Soomaalida awgeed adeegyadi loo aasaasay sidi looga baahnaa ma aysan bixin oo wuxuu adeeggeeda uu ku koobnaa oo keli ah Adiis-Ababa, Jigjiga iyo Godey, balse hadda ay ka howl gasho Addis-Ababa, Godey, Jigjiga, Wajaale, Nageyle iyo Mooyaale." ayuu yiri Maareeyaha shirkadda.
Image caption Shacab ka adeeganayo Rays
"Hadda ayey shirkaddu shaqadeeda si fiican dib ugu billowday sharciyaddeedana waxaa weeye adeeg bixinta maaliyadda haddana sida sharciga dalka uu u oggolaanayo waxay bixisaa dhammaan adeegyada ay Bangiyada bixiyaan oo dhan, keliyah waxaan Bangiyada caadiga ah kaga duwannahay keli ah waxaan xirir la sameyn karin bangiyada caalamiga ah ama lacag doolar ah ayaan dhaqdhaqaajin karin" ayuu iri.
"Adeegyada aan soo kordhinnay oo bangiyada adeegyada ay bixiyaan waxaa ka mid ah inaan teknooloojiyadda Core Banking oo ay bangiyada ku shaqeeyaan inaan ku shaqeyno, internet banking oo aan billaawnay, iyo adeegyada kale."
"Waxaanna dhawaan ku biirin doonnaa adeegyada shirkadda ay bixiso ATM, Lcagaha oo Check lagu bixiyo, Check ay shirkadda leedahay bangia walba laga bixiyo anaguna check bangi kasta aan lacagta ku bixinno, oo bangiyada aan ka wada shaqeyno, waxayna shirkadu dhawaan fureysaa 21 laamood oo cusub oo draasaddooda hadda la soo gabagabeeyey." ayuu yiri.
Guddiga Yurub ayaa saddex bangi ku ganaaxay £413 oo milyan
"Adeegyada ay shirkaddu bixiso waxaa kale oo ka mid Amaahda oo waafaqsan shareecada Islaamka sida Muraabaxada, Mushaarakada, Istisnaac iyo dhammaan adeegyada maliyadda shareecada Islaamka waafaqsan."
"Shirkadduna waxay mustaqbalka ku taameysaa inay laamheeda sii ballaadhiso si ay u haqab tirto baahida dhinaca adeegga Maaliyadda ee ay shacbka deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ku nool ay qabaan." ayuu yiri Maareeyaha guud ee shirkadda Rays Cabdicasiis Xasan Cumar oo BBC-da u warramay.
Image caption Shirkadda Rays